Warshadda Guud ee Difaaca Shiinaha iyo soosaarayaasha | SUREZEN
Tilmaamaha loogu talagalay Isticmaalka Guud ahaan Badbaadinta
Magaca Product:Guud ahaan Badbaadinta
Model / caddaymaha
Qaab: Isugeyn Guud, Laba Geesood ah
Qeexitaannada: 160 (S), 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL)
Qaab dhismeedka qaabdhismeedka
Badeecadani waxay leedahay laba nooc: mid guud iyo laba qaybood oo wadar ah, oo ka kooban huud, dhar iyo surwaal, oo leh suuf laalaab ah, anqaw, dabool iyo dhexda, oo lagu tolay jiinyeer is-qufulka hore ah. Badeecaddu waa mid aan nadiif ahayn, la tuuri karo oo lagu tolay dhar isku dhafan oo filimka PE ah oo aan tolmo wanaagsan lahayn (maaddada ugu weyn). Waxaa jira saddex midab xulasho: cadaan, buluug iyo cagaar.
1. Muuqaalka: muuqaalka guud ee guud waa inuu ahaadaa mid qallalan, nadiif ah oo aan lahayn caariyaysi. Looma oggola dhejis, dillaac, dalool iyo cilado kale dusha sare. Isha tolida waa in la daboolaa. Farqiga tolintu waa inuu ahaadaa 8-14 cirbadho 3cm. Tolmada waa inay ahaataa mid siman, toosan oo ka madax bannaan tolida laga booday. Siibetka looma kashifi karo madaxa jiidayana waa is-quful;
2. Cabbir: cabirku waa inuu buuxiyaa shuruudaha;
3. U adkaysiga qoyaanka dusha sare: heerka qoyaanka ee dhinaca sare waa inuusan ka yarayn Fasalka 3aad;
4. Awood jabka: xoogga jabka qaybaha muhiimka ah waa inuusan ka yarayn 45N;
5. Kordhinta waqtiga nasashada: kordhinta qaybaha muhiimka ahi waa inaysan ka yaraan 15%;
6. Tayada halkii mitir laba jibbaaran: ugu yaraan 30g / m2; 7. U adkaysiga u nuglaanshaha: cadaadiska biyaha ee qaybaha muhiimka ahi waa inuusan ka yarayn 1.67kpa (17cmH2O).
Difaaca guud ee waaxda bukaan socodka, qaybta iyo shaybaarka machadka caafimaadka
1. Ka qaad maqaalada shaqsiga ah ee dhaawici kara guud ahaan, sida qalimaanta, calaamadaha, dahabka, iwm.
2. Markaad xiraneyso hal-wadar guud ahaan, fidi suulasha, ka dibna lugaha geli surwaalka markiisa, iska ilaali taabashada dhulka, markii ugu dambeysa gacmaha iyo madaxa geli guud ahaan, sifee oo xir daboolka. Markaad xirxiraneyso laba qaybood guud ahaan, marka hore gasho qeybta kore ka dibna qeybta hoose, oo samee qeybta hoose oo qeyb ahaan ku daboosho qeybta kore.
3. Hubi in jiinyeerku iyo dabarku si buuxda u kacsan yihiin, oo jidhka oo dhan ku dabool si guud ahaan si buuxda, oo ugu dambayntii hubi in guud ahaan hagaagsan yahay.
Feejignaan, Digniin iyo Deg Deg
1. Fadlan u akhri Tilmaamaha si taxaddar leh ka hor intaadan isticmaalin
2. Badeecadani waa badeecad la tuuri karo oo si adag ayaa loo mamnuucay in dib loo isticmaalo ama lala wadaago dadka kale si loogu isticmaalo.
3. Haddii ay dhacdo waxyeellada baakadaha gudaha, sheyga si adag ayaa loo mamnuucay in la isticmaalo.
4. Kahor intaadan xirin guud ahaan, dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah hawlgalka waa in la diyaariyaa.
5. Xullo cabir ku habboon iyo qaabka guud ee ilaalinta.
6. Wadarta guud ee difaaca waa in la beddelaa maalin kasta; haddii ay jirto qoyaan ama faddarayn, fadlan beddel guud ahaan isla markiiba
7. Haddii loo baahdo, fadlan samee daaweynta jeermiska ka hor isticmaalka
Ka-hortagga:Ka taxaddar inaad isticmaasho haddii aad xasaasiyad ku leedahay sheygan
Kaydinta:Ku kaydi iftiinka laga fogaado, heerkulka caadiga ah iyo qolka gudaha ee hawo leh
Gaadiidka:Ku qaado gawaarida guud ee gaadiidka heerkulka caadiga ah; iska ilaali dabaysha, roobka iyo qorraxda inta lagu guda jiro gaadiidka.
Taariikhda Soosaarka:Eeg xirmada
Dufcaddii Wax Soosaarka No.:Eeg xirmada
Ururka Diiwaangashan / Soosaaraha / Adeegga iibka kadibHebei SUREZEN Waxyaabaha Difaaca Caafimaadka Co., Ltd.
Xafiiska Cinwaanka:Rm. 2303, Tower A, Dhismaha Fortune, 86 Guang'an Street, Degmada Chang'an, Shijiazhuang City, Gobolka Hebei
Waxsoosaarka Goobta:Bariga tuulada Huangjiazhuang, Magaalada Chang'an, Degmada Gaocheng, Magaalada Shijiazhuang
Xiriir: Tel: 0311-89690318 Lambarka boostada: 050000
Xiga: Isugeynta Guud ee Cajaladda Kuleylka-daboolida
Guud ahaan Ilaalinta Cagaaran
Guud ahaan Ilaalinta Cad